“Ka tagistiisa kooxda Barcelona lama hubo!” – ina adeerka Messi – Gool FM
(Barcelona) 03 Seb 2020. Xiddiga reer Argantina ee Maxi Biancucchi, oo ah ina adeerka Lionel Messi ayaa ka hadlay wararka la xiriirinaya kabtanka Barcelona inuu si layaableh uga tagayo kooxda uu ku faani jiray.
33-jirkan reer Argantina ayaa kooxdiisa Barcelona ku wargeliyay rabitaankiisa ku aaddan inuu ka hayaamo garoonka Camp Nou, isagoo u diray warqadda dalbashada in la fasaxo.
Wargeyska “Sport” ayaa daabcay hadalada Maxi Biancucchi, kaddib wareysi uu bixiyay, wuxuuna yiri:
“Ma hubo 100% in Lionel Messi uu ka tagi karo Barcelona”.
“Leo waa kan ugu fiican, horyaal kastana wuxuu ku riyoodaa inuu Messi qeyb ka ahaado uu ka ciyaaro”.
“Layaab iguma noqoneyso xiisaha Manchester City, Paris Saint-Germain, ama mid ka mid ah kooxaha ugu muhiimsan Talyaaniga”.
“Haddii Leo uu ka tago Barcelona, ​​uma maleynayo inuusan awoodi doonin inuu doorto koox ka ciyaarta horyaalka Talyaaniga, sababtoo ah waa tartanka heerkiisu uu aad u sarreeyo”.
Si kastaba ha noqotee, Maxi Biancucchi ayaa wuxuu xirfadiisa kubadda cagta kala bilaabay magaalada Rosario ee dalka Argantina xiddiga ay ina adeerka yihiin ee Lionel Messi, intaas ka dib wuxuu u soo ciyaaray kooxo dhowr ah oo ka dhisan Brazil, Paraguay iyo Mexico.